Rugby – «Lalaon’ny Nosy 2019»: nanampy ny Makis ny minisitra Hajo | NewsMada
Rugby – «Lalaon’ny Nosy 2019»: nanampy ny Makis ny minisitra Hajo
Tsy nitazam-potsiny fa nitondra ny voatsirambin’ny tanany, hanohanana sy hanampiana ny Makis de Madagascar, hiatrehana ny “Lalaon’ny Nosy” (JIOI 2019), tanterahina atsy Nosy Maorisy, ny minisitra mpiahy, Andrianainarivelo Hajo. Nisy ny fihaonany tamin’ireo mpilalao, ny talata lasa teo, tetsy amin’ny toeram-piasany etsy Anosy. Ankoatra ny tsodrano, ho an’ny delegasiona malagasy, notolorany vary amin’ny gony sy fanamiana ary vatsin-dalana avokoa ireo mpilalao 12 mirahalahy miaraka amin’ny mpanazatra sy ny filohan’ny delegasiona hitarika ny ekipa. Notsiahiviny fa amin’ny maha mpamboly ny tenany ny nahatonga azy hanome vary ny Makis.
“Fifanekena efa nifanaovana ny antsika ka manatanteraka izany aho. Mila miezaka ianareo raha mba te hotsenaina makotroka toy ireny an’ny Barea ireny. Isika, tsy maintsy mandresy”, hoy ny minisitra Hajo.
Nohamafisiny fa mila mandresy ny ekipa fa tsy mandray anjara fotsiny. Nisaotra ny minisitra mpiahy, Rakotomalala Marcel, filohan’ny Malagasy Rugby, nampanantena fa hitondra medaly volamena mody an-tanindrazana, amin’ity “Lalaon’ny Nosy”, andiany faha-10, ity. Na izany aza, nanamafy ny filohan’ny Malagasy Rugby fa ankoatra ity “Lalaon’ny Nosy” ity. Tena tanjona ny hahazoana miatrika ny “Lalao Olympika 2020”.